बुटवलमा घ’ट्यो ड’रला’ग्दो घ”ट’ना , अमृता खत्रीको ह”त्या कि आ”त्मह”त्या ?दाजुलाई बचाउन अपिल गर्दै म्यासेज लेखेकि थिइन् अमृताले घ”टना र’ह’स्य’मय बन्दै … - सिधा मिडिया
बुटवलमा घ’ट्यो ड’रला’ग्दो घ”ट’ना , अमृता खत्रीको ह”त्या कि आ”त्मह”त्या ?दाजुलाई बचाउन अपिल गर्दै म्यासेज लेखेकि थिइन् अमृताले घ”टना र’ह’स्य’मय बन्दै …
१ बैशाख २०७९, बिहीबार २०:३८ मा प्रकाशित
रुपन्देहीको तिलोत्तमा–२ भेटनरी लाइनमा गए राति एक युवतीको वि”ष सेवनबाट मृ”त्यु भएको छ । वि”ष सेवन गरी घाइते भएकी अमृतालाई उनका श्रीमानले नै उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा पुर्याएपनि अस्पतालले मृ”त घोषणा गरेको ईलाका प्र”हरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख ठक बहादुर केसीले बताए ।
बुधबार राति करिब पौने दश बजेको समयमा स्थानीय २९ वर्षीया अमृता खत्रीको वि”ष सेवनबाट मृ”त्यु भएको हो । अमृताका आफन्तले घट”नाको स”त्यतथ्य छानविन हुनुपर्ने तथा दो”षिमाथि कडा कार”बाहीको माग गर्दै अमृताको घरअगाडी वि”रोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
अमृताको मृ”त्युसँगै उनको माइति पक्षले श्रीमानबाटै ह”त्या भएको भन्दै कार”बाहीको मागसहित अमृतको घर घे”राउ गरेका छन् । मृ”तकका दाजु पर्ने एक आफन्तले भने,–‘अमृताले बुधबार राती करिब साढे ९ बजेको समयमा आफ्नो दाजुलाई बचाउन अपिल गर्दै म्यासेज लेखेको थियो । म्यासेज आएको जानकारी हुनासाथ कुरा बुझ्दैजाँदा करिब १५ मिनेटपछि अस्पतालमा मृ”त्यु भएको खबर आयो । माईति पक्षबाट श्रीमानले नै ह”त्या गरेको भन्ने आ”रोप छ, सोही आधारमा उनका श्रीमानलाई प”क्राउ गरेका छौं ।
केसीले भने, आफन्तले वि”रोध गर्दै घर घेराउ गरेको भन्ने छ, अनुसन्धान अघि बढ्छ अमृताका आफन्तले घ”टना रह”स्यमयी भएको भन्दै ह”त्याको दाबी गरेको छ । उनले अघि भने, ‘उनले (अमृता) ले आफै वि”ष सेवन गरकोभन्दा पनि श्रीमानले वि”ष खुलाएको हुनसक्छ, अस्पतालले पनि त्यहाँ नपुग्दै मृ””त्यु भएको उल्लेख गरेको छ भने अमृताको डायरीमा रहेको अन्तिम पाना च्यातिएको छ, त्यसले केही रहस्यहरु लुकाएको हुनसक्छ । बुटवलमा घट्यो डरलाग्दो घ”टना , अमुता खत्रीको ह”त्या कि आ”त्मह”त्या त ? घ”टना रहस्य”मय बन्दै हेर्नुहोस’.
मृ”तकका दाजु पर्ने एक आफन्तले भने,–‘अमृताले बुधबार राती करिब साढे ९ बजेको समयमा आफ्नो दाजुलाई बचाउन अपिल गर्दै म्यासेज लेखेको थियो । म्यासेज आएको जानकारी हुनासाथ कुरा बुझ्दैजाँदा करिब १५ मिनेटपछि अस्पतालमा मृ”त्यु भएको खबर आयो । माईति पक्षबाट श्रीमानले नै ह”त्या गरेको भन्ने आ”रोप छ, सोही आधारमा उनका श्रीमानलाई प”क्राउ गरेका छौं । केसीले भने, आफन्तले वि”रोध गर्दै घर घेराउ गरेको भन्ने छ, अनुसन्धान अघि बढ्छ अमृताका आफन्तले घ”टना रह”स्यमयी भएको भन्दै ह”त्याको दाबी गरेको छ ।